Thấu cảm là gì? Sự khác nhau giữa thấu cảm và cảm thông là gì? | Anybook.vn - Anybook
Thấu cảm là gì? Sự khác nhau giữa thấu cảm và cảm thông là gì? | Anybook.vn
Inona no maha samy hafa ny fiaraha-miory sy ny fiaraha-miory? Nahoana amin’ny resaka fitiavana no mila maneho fankasitrahana sy fiaraha-miory amin’ny olon-tianao? Andeha hojerentsika ato amin’ity lahatsoratra ity!
Efa nisokatra tamin’ny olon-tianao ve ianao, nefa nahazo torohevitra tsy nisy fiaraha-miory sy fangorahana? Sa indraindray ianao no mamadika ny tantaran’ny hafa ho anao? Sa matetika ianao no mahatsapa fa misarika ny fihetseham-pon’ny manodidina anao? Raha eny ny valiny dia azo inoana fa olona miombom-pihetseham-po ianao! Ka mba hamaliana ny fanontaniana hoe inona no atao hoe fiaraha-miory, andeha hojerentsika ny lahatsoratra etsy ambany!
1 I. Inona no atao hoe Empathy?
2 II. Avahana ny fiaraha-miory sy ny fiaraha-miory
2.1 1. Inona no atao hoe fiaraha-miory?
2.2 2. Firaisam-po sy fiaraha-miory
3 III. Nahoana no zava-dehibe ny fiaraha-miory?
3.1 1. Amin’ny fiainana manokana
3.2 2. Any am-piasana
4 IV. 12 Toetran’ny olona mangoraka
4.1 1. Fahalalana sy finiavana hianatra
4.2 2. “Fanafody” ho an’ny fanahy ny manirery
4.3 3. Mahaiza mahatsapa ny herin’ny hafa
4.4 4. Katsaho mandrakariva ny fahamarinana
4.5 5. Ilay olona havoaka
4.6 6. Reraka ara-batana sy ara-tsaina foana
4.7 7. fahazarana mampiankin-doha
4.8 8. Variana amin’ny zava-miafina
4.9 9. Famoronana
4.10 10. Tiavo ny natiora sy ny biby
4.11 11. Motivation avy ao anaty
4.12 12. Tia fahafahana ary tia mikaroka zava-baovao
5 V. Fehiny
I. Inona no atao hoe Empathy?
Inona no atao hoe fiaraha-miory? Mitaky antsika hahay hametraka ny tenantsika eo amin’ny toeran’ny hafa, hahatsapa ny fihetseham-pon’ny hafa, ary ho afaka hizara izany amin’izy ireo avy eo.
Araka ny voalazan’ny Master of Psychology Paul Ekman ao amin’ny Oniversiten’i Kalifornia, ny ‘fangorahana’ dia mizara ho sokajy telo:
Ny fiaraha-mientana ara-tsaina: ny fahafahana mahazo sy mandray ny zavatra tsapan’ny olona na eritreritra, ho toy ny fantsom-baovao.
Fihetseham-po ara-pihetseham-po: ny fahafahana mahatakatra ny fihetseham-po sy ny fihetseham-pon’ny hafa amin’ny alàlan’ny fifandraisana ara-pihetseham-po.
+ Fangoraham-po feno fangorahana: io karazana fiaraha-miory io dia ahitana asa; raha mahatakatra sy mizara ny fihetseham-pon’ny olona iray ianao, dia fantatrao izay azonao atao ary vonona ny hanampy azy ireo ianao
Ny fiaraha-miory dia rehefa: Vao avy nisaraka tamin’ny sipa 6 taona ny namanao akaiky indrindra. Na dia tsy tia an’ilay olona mihitsy aza ianao ary tsy nanaiky mihitsy ny amin’ilay fiarahana, dia tsy maintsy arianao foana ilay fitsarana hoe “Jereo fa efa nolazaiko taminao” fa hifantoka amin’ny fihetseham-pon’ilay namana. Omeo fihina izy ireo ary henonao amin’ny fo manontolo ny zavatra niainany.
Matetika no afangaro amin’ny fangorahana sy ny fangorahana ary ny fangorahana ny fangorahana. Araka ny voalazan’ny Psychology Today, ireo hevitra ireo dia miavaka amin’ny haavon’ny fahatakarana sy ny fahalianana, indrindra:
Misaona: Fantatro fa mijaly ianao
Fangorahana: Miahy ny fahorianao aho
Fangorahana: Tsapako ny fanaintainanao
Fangoraham-po: Te hanampy hanamaivana ny fijalianao aho
Jereo koa: Famerenana boky momba ny fahaiza-miaina tsara: fifandanjana ara-pihetseham-po, na dia mandritra ny tafio-drivotra aza
Inona no atao hoe fiaraha-miory?
II. Avahana ny fiaraha-miory sy ny fiaraha-miory
1. Inona no atao hoe fiaraha-miory?
Araka ny diksionera Oxford, ny ‘fangoraham-po’ dia fanehoana alahelo na alahelo noho ny loza, fangoraham-po, na fahorian’ny hafa, izay matetika aseho amin’ny fehezan-teny mifandray toy ny hoe: “Miala tsiny aho amin’ny fahorian’ny hafa. ny fahaverezanao”, ” Mahantra ianao”,…
READ Checking account là gì? Những điều nên biết về tài khoản vãng lai | Anybook.vn
Na izany aza, ny fanehoana fangorahana dia mety hahatsapa ho lavitra. Matetika izany no hahatonga ilay olona sendra izany hahatsiaro ho lavitra azy sy ilay olona maneho fiaraha-miory. Heverin’izy ireo fa tsy azon’ilay olona ny toe-javatra misy azy.
Ohatra, rehefa misy olona mamoy olon-tiana, dia maneho fiaraha-miory amin’io olona io sy ny fianakaviany ianao, nefa tsy tena takatrao ny famoizana azy raha tsy mbola niaina izany ianao.
2. Firaisam-po sy fiaraha-miory
Inona no maha samy hafa ny fiaraha-miory sy ny fiaraha-miory? Nanamarika toy izao ny Profesora Brené Brown, manam-pahaizana momba ny fiaraha-miory: “Mampitombo ny fifamatorana ny fiaraha-miory. Mampihena ny fifampiraharahana ny fiaraha-miory.”
Mpinamana akaiky i An sy Binh. Tsy vitan’ny hoe nalahelo noho ny fahasahiranan’i Binh tamin’ny fahazazany i An, fa nieritreritra koa ny fiainana miaraka amin’ny reny maditra sy ny rainy mpisotro toaka. Takatr’i An fa noho izany dia tsy maintsy mianatra miaina tsy miantehitra amin’iza na iza i Binh, ary sarotra foana ny mangataka fanampiana, na dia avy amin’i An aza. Ny fiaraha-miory dia nanampy an’i An hisoroka ny tsy fifankahazoana sy ny fanakianana momba ny fomba fiainan’i Binh. Amin’izay fotoana izay ihany koa dia afaka mahita fomba hanampiana an’i Binh sy hitazonana io fifandraisana io i An.
Rehefa miombom-pihetseham-po ianao, dia halahelo ny olona iray noho ny alahelony, fa tsy halahelo toy ny azy. Mazàna no mitsahatra amin’ny teny fampaherezana na famihina mampahery ny fanehoana fangorahana.
Rehefa miombom-pihetseham-po ianao, dia alainao sary an-tsaina ny toe-javatra misy azy, azonao ny alahelony, ary mitomany miaraka aminy mihitsy aza ianao.
Vakio ihany koa: Faharanitan-tsaina ara-pihetseham-po: ny dikan’ny faharanitan-tsaina amin’ny asa sy ny fiainana
III. Nahoana no zava-dehibe ny fiaraha-miory?
1. Amin’ny fiainana manokana
Ny fifandraisana ara-pahasalamana dia mila fikarakarana, fikarakarana ary fiaraha-miory. Tsy ho ela dia ho levona ny fisakaizana tsara tarehy na ny fifankatiavana tsy misy fiaraha-miory, fangorahana, ary fifampizarana. Rehefa tsy mieritreritra afa-tsy ny tombontsoany manokana ny olona dia mijaly ny hafa ao anatin’ilay fifandraisana.
Raha mandà tsy hijery ny fihetseham-pony sy ny zavatra avy amin’ny fomba fijerin’ny hafa ny olona iray ao amin’ny fanambadiana, dia mety hiatrika olana maro ao amin’ny fanambadiany izy. Tsy misy olona roa mitovy eritreritra ary tsy misy olona roa manana traikefa mitovy. Samy mitondra ny heviny sy ny traikefany ary ny tolonany ny olona ao anatin’ny fifandraisana. Raha tsy manam-potoana hiezaka hifandray amin’ny fihetseham-pony sy ny fomba fijerin’ny tsirairay ianao, dia mety hahatsiaro ho tsy tiana sy tsy voakarakara ny olona ao anatin’ny fanambadiana.
2. Any am-piasana
Ho an’ny olona maro, ny toeram-piasana dia toerana ho an’ny fiaraha-miasa. Ho an’ny asa mitaky ezaka ataon’ny ekipa dia tena zava-dehibe ny maka fotoana hifandraisana amin’ny mpiara-miasa. Na dia tsy miara-miasa amin’ny tetikasa iray aza ny rehetra, dia zava-dehibe ny fiarahana amin’ny mpiara-miasa aminao. Ny fampiasana fiaraha-miory dia ampahany manan-danja amin’ny fifandraisana milamina. Raha tsy misy izany, dia ho tafiditra ao anatin’ny fifandirana sy ny tsy fitovian-kevitra ianao.
Zava-dehibe ho an’ny mpitondra ihany koa ny fampiasana ny fiaraha-miory. Ny mpampiasa tsy manana fiaraha-miory dia mety hanery ny mpiasany hanao fanao tsy ara-drariny. Ny mpitantana tsy misy fiaraha-miory dia afaka manosika ny mpiasa hiasa mihoatra noho ny ara-pahasalamana sy ara-dalàna ary mety ho henjana loatra rehefa manao fahadisoana ny mpiasa.
READ PL là gì? Thuật ngữ PL trong toán học và kinh doanh xuất nhập khẩu | Anybook.vn
Fanampin’izay, ny haavon’ny fiaraha-miory amin’ny toeram-piasana dia mifandray amin’ny fitomboan’ny fahombiazana, ny fitomboan’ny varotra ary ny fitarihana tsara kokoa.
Ankoatr’izay, ny fiaraha-miory dia mampihena ny adin-tsaina ary mampiroborobo ny faharetana, ny fanasitranana, ny fitomboan’ny tena manokana, ny fahaiza-mamorona, ny fianarana ary ny fikolokoloana fifandraisana. Ny fiaraha-miory koa dia manova ny fifandirana ary manohana ny fiaraha-miasa sy ny fiovana ara-tsosialy tsara.
Inona no atao hoe fiaraha-miory? Zava-dehibe koa ny fiaraha-miory, satria manampy antsika hahatakatra ny fihetseham-pon’ny hafa izany mba hahafahantsika mamaly araka ny tokony ho izy ny toe-javatra. Matetika izy io dia mifandray amin’ny fitondran-tena ara-tsosialy, ary misy fanadihadiana mampiseho fa ny fiaraha-miory bebe kokoa dia mitarika amin’ny fitondran-tena manampy bebe kokoa.
Jereo koa: Fahaiza-manao mahomby amin’ny fiaraha-miasa: 5 toetra mahazatra rehefa miasa ao anaty vondrona
IV. 12 Toetran’ny olona mangoraka
Rehefa avy nianatra momba ny “inona no atao hoe fiaraha-miory?”, ato amin’ity fizarana ity isika dia handinika ny toetra mampiavaka ny empath, izay nofintinin’ny mpikaroka.
1. Fahalalana sy finiavana hianatra
Satria mihevitra ny zavatra manodidina azy foana izy ireo, dia manana fahatakarana lalina momba ny fiainana ny empath, saingy tsy asehony na zarainy amin’ny hafa izany. Ny fahatakarany matetika dia avy amin’ny intuition sy ny fihetseham-po fa tsy ny fahalalana. Na izany aza, dia mbola mazoto mianatra zava-baovao izy ireo. Matetika ny Empaths dia sosotra amin’ny karazana fanontaniana misokatra, ka miezaka mitady ny valiny foana izy ireo. Raha mahatsapa izy ireo fa mahafantatra zavatra, dia hahita fomba hanamarinana izany.
2. “Fanafody” ho an’ny fanahy ny manirery
Mety hiteraka korontana ara-pihetseham-po ny toerana toy ny toeram-pivarotana, fivarotana lehibe, na kianja. Ho sahiran-tsaina amin’ny angovo maro mifanipaka sy sarotra izy ireo. Mila toerana mangina ny Empaths mba hamelomana indray. Ho azy ireo, ny “feon’ny” fahanginana dia fomba iray hanasitranana ny fanahy.
3. Mahaiza mahatsapa ny herin’ny hafa
Tsy vitan’ny hoe mahatsapa hery be dia be avy amin’ny fihetseham-po manodidina azy izy ireo, fa afaka “mandefa famantarana” amin’ny fihetseham-po amin’ny halavirana lavitra. Ny Empaths dia tena mahay mamantatra ny angovo ratsy toy ny fahatezerana, fialonana, fahatezerana ary fankahalana. Ireo fikorianan’ny angovo ireo dia mahatonga azy ireo hahatsiaro tena mavesatra sy miraikitra.
Noho io fahaiza-manao manokana io ihany koa dia mora voan’ny soritr’aretin’ny vatan’ny olon-kafa izy ireo, toy ny sery, aretina na aretin’ny vatana. Izy ireo dia mandray ireo soritr’aretina ireo avy amin’ny olon-tiana na olona izay tsapany fa mifandray ara-panahy. Ankoatr’izay, tsy zakan’ny empath ny mijery seho feno herisetra sy loza. Ny sary marary sy maty amin’ny fahitalavitra na amin’ny gazety dia hisy fiantraikany be amin’ny heriny.
4. Katsaho mandrakariva ny fahamarinana
Empaths toy ny fahamarinan-toetra, mazava ary ny fahaizana mamantatra lainga. Mora mahita amin’ny alalan’ny “saron-tava” sandoka izy ireo ary mahafantatra ny tena fikasana ao ambadiky ny tenin’ny hafa. Na dia tsy misy fironana amin’ny “hamaka” ny mpanohitra aza, ho azy ireo dia tsy azo ekena ny lainga.
READ Đắc Nhân Tâm - Tải sách truyện Pdf & Ứng dụng APK Android | Anybook.vn
5. Ilay olona havoaka
Raha misy olona mijaly na sahirana amin’ny fiainana, dia hilefitra avy hatrany ny fiaraha-miory. Manome ny sainy sy ny fangoraham-pony hatrany amin’ireo izay tafahitsoka sy vonona hanampy ireo izay tena mila azy izy ireo. Ny olona miray saina dia tsy tia miaraka amin’ny olona miavonavona loatra, tsy manana fiaraha-miory sy mizara.
Mety ho lasa “fako” izy ireo amin’ny olan’ny olon-drehetra, eny fa na dia ny olon-tsy fantatra aza. Satria hainy ny mametraka ny tenany eo amin’ny toeran’ny hafa mba hahatakatra lalina, ny fiaraha-miory dia nofidian’ny olona ho toerana iresahana. Matetika izy ireo dia tsy hiresaka momba ny tenany loatra, fa hizara amin’ny olona tena atokisany fotsiny. Amin’ny maha mpihaino mahay azy dia tia mianatra sy mikarakara ny manodidina azy foana izy ireo.
6. Reraka ara-batana sy ara-tsaina foana
Matetika ny Empaths dia mora lanin’ny hafa. Izany dia tsy vitan’ny hoe mora reraka ny vatany ara-batana, fa koa ny fiovan’ny toe-pony. Raha mahazo negativity be loatra izy ireo dia ho lasa mangingina ary tsy te hifandray amin’olona. Satria olo-marina izy ireo, dia tsy te hiaina amin’ny fihetseham-pony fotsiny mba hampifaliana ny hafa.
7. fahazarana mampiankin-doha
Mba tsy ho voataonan’ny fihetseham-pon’ny hafa, dia hiankina amin’ny zavatra manaitaitra izy ireo indraindray. Izany dia fomba iray ahafahan’izy ireo miaro tena amin’ny hery mavesatra ary mamoaka ny tsy mety amin’ny manodidina azy.
Nahoana no zava-dehibe ny fiaraha-miory?
8. Variana amin’ny zava-miafina
Ny fahalalana manjavozavo sy mistery toy ny filôzôfia sy ny ara-panahy dia toa tena manintona ny olona miombom-pihetseham-po. Ankoatra izany, manana fahatakarana lalina momba ny lafiny hafa amin’ny fiainana koa izy ireo, izay mahatonga azy ireo hanasitrana olona maro. Na izany aza, sarotra ny manasitrana ny tenany ny empaths.
Ny Empaths dia manana fahaiza-mamorona matanjaka amin’ny sehatra maro toy ny mihira, mandihy, mihetsika, manao hosodoko na manoratra. Tia manonofy antoandro izy ireo ary afaka miroboka ao amin’ny toerana misy azy mandritra ny ora maro. Ity tontolo feno loko ity no manome azy ireo eritreritra manankarena, manampy azy ireo hanana hevitra mahafinaritra sy mahafinaritra foana.
10. Tiavo ny natiora sy ny biby
Aorian’ny andro be atao dia maniry foana ny hifanaraka amin’ny zavaboary izy ireo ary milalao miaraka amin’ny biby fiompiny. Ho azy ireo, ny zavaboary dia ampahany tena ilaina amin’ny fiainana. Tia biby koa izy ireo, ka ny ankamaroan’ny empath dia mpihinan-kena.
Mijere bebe kokoa: Manangona traikefa hanampiana ny mpitarika ny ekipa hampiroborobo ny fiaraha-miasa
11. Motivation avy ao anaty
Ny Empaths dia mametraka fitiavana be amin’ny zavatra ataony. Na izany aza, na ao an-trano, na any am-pianarana, na any am-piasana, dia mila entanina avy ao anaty ny fiaraha-miory. Raha ketraka izy ireo, dia manomboka manonofy antoandro sy tsy mifantoka. Tsy afaka manao asa tsy ankafiziny izy ireo, satria tsy manome aingam-panahy azy ireo asa ireo. Noho izany, ny olona manana fihetseham-po dia matetika antsoina hoe kamo.
12. Tia fahafahana ary tia mikaroka zava-baovao
Ny fananana fanahy afaka, tsy misy na inona na inona afaka mamatotra na manakana ny fiaraha-miory. Noana foana izy ireo amin’ny aventure sy mikaroka zava-baovao. Matetika izy ireo no miaina amin’izao fotoana izao ary matetika tsy mifikitra amin’ny lasa. Noho izany, tsy tia manangona zavatra tranainy izy ireo na mividy vokatra efa nampiasaina. Mino izy ireo fa mitondra angovo taloha ireo zavatra ireo ary mahatonga azy ireo ho mora kokoa amin’ny stagnation.
Raha fintinina, ny fiaraha-miory dia fahaiza-manao azo ianarana, raha toa ianao ka mahafantatra izany sy miasa mafy. Tsarovy fa ny olon-tianao sy ny namanao dia maniry sy mila henoina sy ekena, fa tsy misaona na miantra. Misaotra anao nanaraka ny lahatsoratry ny 123job.vn.
Previous: Trade marketing là gì? Mô tả công việc trade marketing | Anybook.vn
Next: Những bài thơ hoa bỉ ngạn tiếng trung ấn tượng nhất hiện nay | Anybook.vn